आजको आवश्यकता अर्गानिक सौन्दर्य सामाग्रीको मात्र प्रयोग सौन्दर्यविद उशा खड्का बुढाथोकी – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १०:४६
उशा खड्का बुढाथोकी नेपालको सौन्दर्य दुनियाँ कुनै नौलो नाम होइन । बिगत १५ बर्षदेखी निरन्तर यो पेशामा दत्त चित्तका साथ लाग्नु भएको उहाँ ९ बर्ष बिदेशी भुमिमा कार्य क्षेत्र बनाएर बिभिन्न पद सम्हालेर सन २०१४ मा नेपाल मै केही गर्नु पर्छ भनी फर्कनु भएको हो । बिदेश भुमिमा सिकेको सिप र आधुनिक सौन्दर्य पेशालाई एक मर्यादित बनाउनु पर्छ भनी लागी पर्नु भएको छ । उहाले १५ बर्षमा सिकेका अनुभवलाई नेपालमा पनि केही हिस्सा सिकाएर स्वरोजगार र श्रमजीवी महिलाहरुलाई सौन्दर्य पेशामा कसरी शसक्ती करणका रुपमा उतार्न सकिन्छ भनी सोधकार्यमा लाग्नु भएकी महिला हुन् । सौन्दर्य पेशा पनि एक सिपमुलक र इज्जतदार पेशाको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ भनी आवाज उठाउदै आउनु भएको छ । यो पेशामा बिदेशमा जति इज्जत र आय आर्जन हुन्छ नेपालमा अझै पनि यो न्यून छ र मार्यादित हुन सकेको छैन । क्रमिक रुपमा यो पनि सहज हुने र सबै सौन्दर्य पेशामा लागेका सहकर्मीहरु पनि आकर्शित हुने उहाँको विश्वास छ । विकसीत सबै मुलुकमा यो पेशाको जती महत्व छ त्यो ट्रेन आउन नेपालमा केही समय लाग्ने र यसका लागि यो पेशामा लागि परेका सबैले सहकार्य र समन्वयन गर्नु पर्ने उहाँले एक भेटमा बताउनु भयो । सौन्दर्य पेशा र भोलिका दिनमा यसको भविष्यका विषयमा न्यूज लाइन्स् पाक्षिकका रिता ढकालले लकडाउनको समय पारेर गरेको छोटो कुराकानीको सार संक्षेप ।
अहिले के गदै हुनु हुन्छ ? कति सालदेखि यो पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
तत्काल कोराना र लकडाउनका कारण म फुर्सद मै छु तर बिगत ३ बर्ष देखि नेपाल मै एक स्थापित कम्पनीमा सिनियर ब्यूटिसियनको रुपमा आवद्ध छु । मैले यो पेशा अंगालेको सन २००५ देखि हो विभिन्न देश र नेपालमा गरी हालसम्म १५ बर्षदेखि निरन्तर छु ।
तपाईं त विदेशी भुमिमा पनि निकै समय काम गरेर फर्कनु भयो, बिदेश र नेपालमा के भिन्नता पाउनु भयो ?
धेरै नै फरक छ मैले पनि नेपालमा ब्यूटिसियनको कोर्ष गरेर धेरै राम्रा पार्लरहरुमा काम गरेर विदेश गएको हुँ तर काम गर्न निकै कठिन भयो । मैले सिकेको सिपहरुको केही हिस्सा मात्र काम लाग्यो त्यसकारण मैले पुन त्यहाँको कोर्ष गरेर मात्र काम शुरु गर्न पाए त्यस कारण यसबाट पनि सहज बुझ्न सकिन्छ कि काम गर्ने शैली, त्यहाँको इक्युप्मेन्ट, पार्लर सेटअप, भाषा, कस्टोमरलाई डिल गर्ने प्रोसेस, भिन्न भिन्न देशका सहकर्मी, नियम कानुन धेरै फरक छ । जे होस् विदेश मै गएर काम गर्ने हो भने अली भिन्न हिसाबले एडभान्स कोर्ष गर्नुको साथै केही अर्गानिक टिप्सहरुको जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
यो पेशामा पनि अर्गानिक हुन्छ ? सौन्दर्य पेशामा के के अर्गानिक प्रयोग हुन्छ ?
यो पेशामा पनि धेरै सौन्दर्य सामाग्रीहरु अर्गानिक प्रयोग हुन्छ र पछिल्लो समय यसमा धेरैको आकर्षण बढेको छ । जस्तो बिभिन्न केमीकल मिसावट भएका सौन्दर्य सामाग्री प्रयोग गर्दा स्किनमा लामो समय सम्म असर पर्ने एलर्जी हुने हुँदा प्राकृतिक जडिबुटी र फलफुल प्रयोग गरेर बनाइएका सौन्दर्य सामाग्रीहरु प्रयोगमा आउन थालेको छ । बिदेशमा यो धेरै पहिला देखि प्रयोग हुन्थ्यो । मैले काम गरेका नेपालका प्राय सबै ब्यूटी सलुनमा बिदेशमा सिकेको होम मेड अर्गानिक वाक्स प्रयोगमा ल्याएको छु र सबै कस्टोमरले मन पराएका छन् ।
अर्गानिक वाक्स कसरी बनाउने त ?
यो विशुद्द रुपमा प्राकृतिक अर्गानिक कागतीको रस, चिनी लगायत मिसाएर घर या पार्लर मै बनाउन सकिन्छ र यसमा कुनै केमिकल मिसावट गरिएको हुँदैन । यसले स्किनमा कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन र एलर्जी हुने समस्या पनि हुन्न ।
बिदेशमा नेपाली ब्यूटिसियनहरुको निकै डिमान्ड छ र कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भन्छन नि ?
नेपाली धेरै इमानदार र परिश्रमी हुन्छन भन्ने बिदेशीहरुमा छाप परेको छ र हामीले अली अपग्रेट भएर हाइ स्किलमा ब्यूटीसियन गर्न सक्यौं भने नेपाली ब्यूटीसियनहरुको भविष्य राम्रो देखेको छु । नेपालमा पनि धेरै राम्रो हुँदै गएको छ, राम्रा राम्रा ब्रान्डका ब्यूटी सलुनहरु खोलेका छन धेरैले रोजगार पाएका पनि छन । ब्यूटीसियन पेशा पनि हस्पिटालिटिको एक अभिन्न हिस्सा हुनाले अन्य पेशाको तुलनामा विकासित देशहरुमा राम्रो कमाइ छ ।
यो पेशामा नयाँ आउने पुस्तालाई सफल ब्यूटीसियन हुन के सल्लाह दिनु हुन्छ ?
यो पेशा एक हिसाबले सेन्सेटिप र रिक्स रहने हुँदा अत्यन्त सिन्सियर भएर काम गर्नु प¥यो र पहिलाको तुलनामा अहिले काम गर्न सहज पनि भएको छ । धेरै स्तरिय ट्रेनिङग सेन्टरहरु खुलेका छन् प्रसस्त आधुनिक इक्युपमेन्ट र सौन्दर्य सामाग्री उपलब्द छन् । विदेशी एक्पटिजहरु भित्र्याएर एक्पोज गरिएको छ । पहिलाको जस्तो ब्यूटीसियन भनेको साइड जब जस्तो रुपमा लिन पर्ने आवश्यकता छैन । मात्र आफ्नो प्रोफेसनमा सिरिएस भएर लाग्नु जरुरी छ । म भविष्य उज्वल देख्छु ।